Onena i Jesoa nahita ireo vahoaka
Sabotsy 05 desambra 2020 — Herinandro voalohany amin'ny Fiaviana — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 9, 35 — 10, 1. 6-8 — Manandrata feo eny amin’ny tendrombohitra, ianao izay mitory teny soa ; indro fa tonga amin’ny heriny ny Tompo.
Philippe Rinaldi, Olontsambatra (Kintan'ny finoana) 05/12/2020 06:30
Onena i Jesoa nahita ireo vahoaka (Tenin'ny Tompo) 05/12/2020 04:00
Ny lanjan'ny famakiana boky... (Miaina sy mitia) 04/12/2020 10:00
Masindahy Jean Damascène (Kintan'ny finoana) 04/12/2020 06:30
Nino an’i Jesoa ireo jamba roa lahy nahiratra (Tenin'ny Tompo) 04/12/2020 04:00
Ny varika mena... (Tontolo meva) 03/12/2020 18:30
Fiangonana eto Madagasikara : Fifaninanana hitory ny Vaovao Mahafaly
Naseho ny : 3 marsa 2020
Nandray anjara lehibe tamin’ny fampivoarana ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly teto Madagasikara ny Fikambanan’i Jesoa, tamin’ny taonjato faha-19. Anarana tsy azo adinoina amin’ireo misionera zezoita frantsay tamin’izany i P. Dalmond, P. Jouen, P. Cazet, P Finaz. Na dia teo aza ny olana nosedraina tamin’ny fifanoheran’ny anglisy sy frantsay, ny katolika sy ny protestanta izay fivavahan’ny mpitondra fanjakana tamin’izany, dia tsy nahasakana ny fitombon’ny kristianina katolika izany noho ny ezaka nataon’ireo misionera zezoita sy lasalianina.
Mibebaka fa navotana
Naseho ny : 26 febroary 2020
Nafantoky ny Papa François tamin’ny fibanjinana ny Misterin’ny fijalianan’ny Tompo sy ny fitsanganany ho velona ny hafatra ho an’ny Karemy amin’ity taona 2020 ity. Mistery izay fototry ny fiainana maha-kristianina. Hafatra nampitondrainy ny lohateny hoe : "Mihanta aminareo amin’ny anaran’i Kristy izahay : mihavàna re amin’Andriamanitra ianareo !"(2 Kor 5, 20).
Eny ho an'ny aina
Manentana ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana ny Papa François mba hanome lanja ny asany, ka hifikitra amin'ny "eny" ho an'ny aina. Nankahery ireo vesaran'ny aretina izy hitoky amin'i Jesoa-Kristy, famindram-po sy fankaherezana. Nivoitra ireo ao amin'ny hafatry ny Papa François ho an'ny fankalazana ny andro eran-tany faha-28 ho an'ny marary, ankalazaina ny 11 febroary 2020.
Maria sy ny finoana
Naseho ny : 6 janoary 2020
Ny finoana no loharano sy ivon’ny fiainan’ny kristianina. Valy ataon’ny olona amin’ny fitantanan’Andriamanitra ny fiainany ny finoana. I Masina Maria no mpino voalohany naneho izany. Manazava amintsika i Mgr Jean Pascal Andriantsoavina, Eveka mpanampy, Arsidiosezin'Antananarivo: “Nanao ahoana ny niainan’i Masina Maria Virjiny ny finoana?”
Pejy 3 amin'ny 4